The New York Times inowana Wordle kweinodarika miriyoni imwe yemadhora | Nhau dze iPhone
Pane dzimwe nguva dzaunofanirwa kushamiswa nenhau dzese dzakatenderedza nyika yetekinoroji. Takaona kuti Apple yakapinda sei munyika yemitambo yemavhidhiyo neApple Arcade, kana kuti Netflix iri kuita zvimwe chete kuburikidza nemitambo yemahara nekuda kwekunyoreswa kwayo, asi ndiani aizotiudza hasha dziri kukonzeresa Wordle. Pamwe hauzive, zvakaoma, asi Wordle arikunzwa. 6 kuedza kubvisa izwi rine mavara mashanu, mutambo uri nyore unobata ese masocial network. Uye zvechokwadi, The New York Times yanga ine shanje uye ichangobva kutenga Wordle nemari inodarika miriyoni imwe yemadhora...
Hongu, vazhinji venyu muchashamisika kuti nzira yekukurukurirana seyo New York Times kufarira mutambo wehunhu uhu. Isu tinofanirwa kudzokera kune yakapfuura, kune yakanyorwa kudhinda pabepa, Unorangarira peji rezvido here? Iyo New York Times yakamboenda kune chaiyo ecosystem, chokwadi ine imwe yezvinyoreswa nevashandisi vakawanda munyika yenhau, uye hongu. ane zvaanofarira Wordle anosvika kuti ave chikamu chezvinovaraidza zveNew York Times.
Ichokwadi kuti ivo zvakare vane chinyoreso chekuzvivaraidza, asi ikozvino, vanojekesa izvozvo mutambo ucharamba wakasununguka, pakupedzisira ivo vacharova vese vashandisi vanoedza kutsvaga izwi idzva reWordle zuva rega rega, uye izvi zvese zvine mutengo: nhamba yechinomwe. Tichaona gare gare kana nekuda kwekutenga uku tichakwanisa kuona a App yeIOS, asi chokwadi ndechekuti Wordle iri nyore uye inopindwa muropa zvekuti iko nyore kupinda muwebhu kuita "chido" ichi chave chiri kiyi pakubudirira kwayo. Zviya, Google Anga achidawo kujoinha hasha dzeWordle nezai reEaster. Tsvaga Wordle muinjini yekutsvaga uye tarisa izvo zvinoitika neiyo brand logo...
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » The New York Times inowana Wordle kweanopfuura miriyoni imwe yemadhora
Aya ndiwo emojis matsva anosanganisirwa mune yekutanga beta yeIOS 15.4
Imwe nyaya chaiyo yeApple Watch inoponesa hupenyu hwemunhu